Osoo hin bekkin adaa dhaan midhaa kan gagessan - Project dldl/ድልድል
Osoo hin bekkin adaa dhaan midhaa kan gagessan
Piroojektiin Dildil kan dhaabbatee dhimmi aadaa- amantaa xiyyeffannaa gochuun wanta isaan barbaachisu ykn jijjiiruu hubannoo muraasa keessattuu dubartoota irratti miidhaa gahu hambisuuf qaamni miidhaa fidullee husbannoo gaarii akka argatu yaaduun kan hojjatuudha.
Addunyaa irratti amantaa bu’ura godhanii qaama miidhaan irra gahe ofii irraa dhorkuun kan hojjatan dhaabblieen ni jiru. Isaanis ingiliffaan prograami RAVE kanaadaa keessati ykn ka’umsa isanii amanta bu’ura gochuun dubartoota irratti miidhaa gahu hiikuuf Itiyoophaa keessatti dhaabbilee argaman. Dhaabbileewwan Kun hawaasa amantaa hordofuu fii warra addunyaa duuka bu’an waliin walitti qabuun hojiiwwan hojjatan bu’a qabeessa miti.
Ingiliffaan miidhaa adaa qabessaa kan jedhamee ibsamu namoonni yeroo ibsan boca aadaa kan qaban muraasni yaliin akka barbachisu ibsu. Haata’u amantaa fii aadaa walitti fiduun rakkoo furuuf wanti godhame hin jiru. Dhimma kana caalaan barbaachisaa kan isa godhe aadaa ykn amantaa baay’ee kan ta’e kuntaan hawwaasaa baay’achuu isaati.
Suuta jechuun guddachaa kan dhufa dhimma kana irratti hojjatan projeektiwwan rakkoo warra godanaanii kan hiikaan hinturre.
Fkn rakkoo loqodaa/afaaniin/ yalii argachuu dhabuu amanta itti dhufan fi aadaa kan hubannoo keessa kan hin galle, seeraa biyyaa Ingiliizii kan hin barreedha ta’uu isaatiin kutaan miidhaa biyya irratti qaama hojjetu kan gargaaruudha. Qaamawwan dhimma amantaa akka safartuutti fudhachuun rakkoowwan furuuf dhaabbilee mootummaa kan hin taane kan iiti gargaaruudha.